Qubachiisa siiqqeewwanii to'ata.
Caancala Dhangii - Siiqqee - Siiqqee Y - Safaraa (Taattoota) fili
Siilloon Y ofumaan fayyadamuun LibreOffice madaalama kanaafuu gatiin guutolaa ni mul'ata.
Bu'aa murtaa'e irra gahuuf, madaallii siilloo harkaan jijjiruu dandeessa. Fakkenyaaf, bali'na gubbaa qofa mul'isuun sarara duwwaa gara oliitti orofuu dandeessa
Siiqqota bal'ina kana irratti garagar qooduuf gatii galchuu dandeessa. Amaloota shanan ofumaan qindeessi Gadaantoo, Irrata, Orofaa buraalaa, Orofaa maddee fi Gatii raggoo.
Gadaantoo siilloo jalqabaatiif gatii xiqqaa qindeessa.
Buraalaa siilloo dhumaatiif gatii guddaa qindeessa.
Qoqoodama Siilloo dursaaf orofaa siiqqoo qindeessa. Orofaan dursaa irra guddaa gatii bal'inaa hin ta'u.
Lakkaawwi orofaa gadaantoo
Orofaa qoqoodama siqqotaaf qindeessa.
Qabannoo gatii siilloo kam irratti mul'isuu akka qabdu ibsa.
Gatii haaromsuuf duraan dursiteeOfumaan filannoo filachuu hin qabdu.
Yoo gatii "fixed" tiin dalagde haala kana akka hin hojjenne dhorki, akka inni madaalli ofumaa hin eeyyamne.
Siiqqoon logartimaan yoo garagar qooduu barbaadde ibsa.
Gatiilee gongumaa gargar ta'aaniin hojechuu yoo barbaadde haala kan fayydami. Madaalli logaartimaa fayyadamuu dandeessa tarsaa sararaa kan siilloo fageenya walqixa, garuu gatii hir'isu yookan dabalu danda'a.
Gatii guddaa fi xiqqaan siilloo irrati eessatti akka mul'atu qindeessa. Haalli hin mirkaneeffamne kallatii herregatini. Kana jechuun sirna qaxxamura walgitaa kan siilloon x gatii gadii fi siilloon y gatii gadii gara jalaatti agarsiisu. Sirna waggee walgitaaf kofni herregummaa kallattiin siilloo kallatti sa'aatii fi siilloo calii gara keessaati gara alaati.
For some types of axes, you can select to format an axis as text or date, or to detect the type automatically. For the axis type "Date" you can set the following options.
Minimum and maximum value to be shown on the ends of the scale.
Bal'ina guddaa ykn xiqqaa mul'isuuf agarsiisa jijjiira.
Galmeewwan gaafataa hunda agarsiisuuf filadhu.
This page is: /text/schart/01/05040201.xhp
Title is: Madaala